Enjehin’ny manampahefana Rosiana ny fanaovan-gazetin’ny mpianatra amin’ny video iray fanazavana hetsi-panoherana · Global Voices teny Malagasy
Tanora tonian-dahatsoratra efatra no miatrika fanagadrana telo taona an-tranomaizina
Voadika ny 28 Avrily 2021 5:10 GMT
Tonian'ny gazety DOXA [avy any ankavia]: Armen Aramyan, Alla Gutnikova, Vladimir Metelkin, ary Natasha Tyshkevich. Pikantsary avy amin'ny video DOXA.
Tamin'ny 14 avrily, nanaovan'ny mpampihatra lalàna rosiana savahao ny biraon'ny gazetin'ny mpianatra mahaleotena DOXA. Raha ny filazan'ny seha-baovao, nanaovana savahao ihany koa ny efitranon'ireo efatra amin'ireo tonian-dahatsoratra ao aminy ary avy eo dia nampangaina ho nandrisika ny zaza tsy ampy taona handray anjara amin'ny fihetsiketseham-panoherana tsy ara-dalàna.
Nandritra ny fihetsiketsehana 23 Janoary tany Moskoa ho fanohanana ny mpitarika ny fanoherana Alexey Navalny, dia namoaka horonantsary ny DOXA manazava amin'ny mpianatra fa tsy tokony hatahotra ny hilaza ny hevitr'izy ireo ao amin'ny fihetsiketsehana izy ireo ary tsy manana fototra ara-dalàna handroahana ireo mpianatra manatrika izany ny oniversite. Nangataka ny hanesorana ilay horonantsary ilay mpanao sivana rosiana amin'ny aterineto Roskomnadzor, ary nanaiky ny fangatahana ny DOXA, na dia iadian-kevitra aza ny fanitsakitsahana ny lalàna ao amin'ilay horonan-tsary.
“Androany tamin'ny 6 maraina dia nanao savahao tao amin'ny biraon'ny DOXA sy ny tranon'ireo tonia Armen Aramyan, Vladimir Metelkin, Alla Gutnikova ary Natasha Tyshkevich ny manampahefana mpampihatra lalàna, hoy ny seha-baovao tao amin'ny tranokalany tamin'ny 14 aprily.
Mpianatra na maintimolalin'ny Sekoly Ambony momba ny Toekarena (HSE) avokoa ireo tonia efatra, ary avy eo dia nentina nanaovana famotorana avy amin'ny Komity Rosiana mpanao famotorana, ary nampangaina ho nanentana ireo zaza tsy ampy taona hanao ‘hetsika tsy ara-dalàna’ araka ny Andininy 151.2 ampahany 2 amin'ny fehezan-dalàna adiheloka bevava. Ireo fiampangana ireo dia mety hahatonga ireo tanora mpanao gazety hiatrika telo taona an-tranomaizina. Tao anatin'ny roa volana manaraka, ny fitsarana distrika iray any Moskoa dia nanakana azy ireo tsy hiditra an-telefônina sy amin'ny aterineto ary tsy hivoaka ny tranony, izany hoe napetraka amin'ny trano manokana fihazonana ry zareo. Nasiana rojo elektrônika mpitsongodia amin'ny GPS izy efatra mianadahy.
Eo amin'ny fitsarana i Alla Gutnikova, toniandahatsoratra famoahan-gazetin'ny mpianatra DOXA. Manohy amin'ny fisamborana mpanao gazety i Rosia. (Saripikan'i Evgeny Feldman ho an'i Meduza)
Nandritra ny hetsi-panoherana tamin'ity taona ity nanerana an'i Rosia, nanaovan'i DOXA tantara isan'andro ny tsindry bokotry ny fanjakana amin'ny mpianatra mpandray anjara ary nanome torohevitra momba ny zo sivilin'ny mpianatra rehefa iharan'ny tsindry avy amin'ny oniversite sy ny kolejy misy azy ireo.
Nandritra ny fotoam-pitsarana tolakandron'ny alarobia 14 avrily dia mpianatra sy mpanohana am-polony no nifamory teo akaikin'ny fitsarana Basmanny ao Moskoa haneho firaisankina amin'ireo mpanao gazety efatra.
Rosiana mpianatra , mpikaroka, ary maintimolalin'ny HSE mihoatra ny 1.600 no nametraka taratasy misokatra ho an'ny mpitarika ny oniversite anehoany firaisankina sy iantsoantsoany amin'izy ireo fanohanana ampahibemaso ny mpianatry ry zareo:
Nanjary tranga mahazatra ny tsindry ataon'ny polisy amin'ny rafi-pampianarana sy ny vondrom-piarahamonin'ny mpianatra – ary antony iray mampitebiteby izany. Tsy afa-mipetra-potsiny ny anjerimanontolo, amin'ny maha sehatra fisainana ahafaha-mitsikera [mandalina] azy, raha enjehana ny mpianany sy ny maintimolaliny amin'ny fiampangana noforonina an-karihary natao hampitahorana, hampiorenana tahotra ary hanimbana ny firaisankinan'ny mpianatra.
Manampahaizana miisa 900 mahery manerana an'izao tontolo izao, ao anatin'izany ny manam-pahaizana ambony toa an'i Judith Butler, Jodi Dean, ary Slavoj Žižek, no nanao sonia fanambaràna firaisankina amin'ireo tonian-dahatsoratry ny DOXA izay miantso ny fiampangana azy ireo ho “hagegena” ary mitaky ny “hanesorana ny fiampangana rehetra” sy “hampitsaharana avy hatrany ny fanenjehana rehetra amin'ny mpianatra.”
Niantso ihany koa ny famotsorana ireo mpianatra [sady]mpanao gazety mpianatra ny vondrona mpiaro zon'olombelona iraisam-pirenena PEN America, komity miaro ny mpanao gazety (Committee to Protect Journalists) ary ny mpitati-baovao tsy voasakan-tsisintany-Reporters Sans Frontières.
Tokony hanaisotra avy hatrany ny fiampangana an'ireo tonian'ny DOXA ny manampahefana Rosiana, hamerina ny fitaovany ary hamela azy ireo hanao ny asany mitatitra ireo hetsika politika lehibe eto amin'ny firenena tsy misy tahotra.
Na eo aza ny fiampangana miandry ny toniany, nilaza ny DOXA tamin'ny fanambaràny tao amin'ny tranonkalany fa “hanohy hitatitra ireo zavatra manandanja ho an'ny tanora” sy “hijoro ho an'ny zon'izy ireo” ry zareo. Tao amin'ny lahatsoratra famintinana tao amin'ny fantsona Telegram ihany koa ny DOXA nanatsonga ny tenin'ny iray amin'ireo tonian-dahatsoratra, Alla Gutnikova, avy amin'ilay horonantsary nangatahana hoesorina tamin'ny fiandohan'ity taona ity:
Nandritra ny tantara dia nijoro hatrany ho an'ny zonysy ny fahafahany ny tanora sy ny mpianatra. Marina izany 50 taona lasa izay, sy 100 taona lasa izay. Nanambara ny ady amin'ny tanora ny manampahefana, fa izahay no tanora, ary azo antoka fa handresy izahay.